Hoggaamiyihii Alshabaab Oo Geeriyoday. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hoggaamiyihii Alshabaab Oo Geeriyoday.
Muqdisho ( mareeg news ) War kasoo baxay Al Shabaab ayaa lagu beeniyay in uu geeriyooday Amiirka kooxdaasi Ahmed Diriye (Abu Cubeyda) , oo saacadihii lasoo dhaafay warar soo baxayay sheegayeen in uu geeriyoodeen,
Saraakiil katirsan dowlada Soomaaliya ayaa Warbaahinta u sheegay in uu geeriyooday Amiirka Al Shabaab oo la sheegay in uu xanuunsanaa waayihii dambe, waxaana warkan si weyn loogu baahiyay Warbaahinta.
Qoraal lagu baahiyay baraha Internetka ee Al Shabaab taageerta ayaa lagu beeniyay in uu geeriyooday Amiirka Al Shabaab Abuu Cubeyda, waxa ayna Al Shabaab sheegeen in Amiirka uu noolyahay uuna shaqadiisa si caadi ah u wato.
“Sheekh Abu Cubayda wuu noolyahay, wuuna caafimaad qabaa, waqtigii uu Allaah u qoray ayuuna dhiman doonaa, inta ka horeysana wuxuu cadowga Allaah ka hortaagnaan doonaa inay ajandayaashooda gurracan ka hirgeliyaan dhulka Soomaaliyeed ee Muslimka ah” Ayuu yiri Sargaal katirsanaa Al Shabaab.
Al Shabaab ayaa sidoo kale sheegtay in warka ku aadan Geerida Amiir Abuu Cubeyda uu yahay mid lagu doonayo in lagu qariyo sida ay xuseen Heshiiskii dhawaan Dowlada Itoobiya la gashay Dowlada Federaalka Soomaaliya.
Saraakiil katirsan Milatariga Soomaaliya iyo Sirdoonka dowlada ayaa sheegay in Amiirka Al Shabaab maalintii isniinta u dhintay xanuun hayay, mana jiro ilo ka madax banaan Saraakiisha dowlada iyo Al Shabaab oo xaqiijin kara xaalada Amiirka Al Shabaab.